DOSBox-X 0.83.8 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweApple's M1 | Linux Vakapindwa muropa
DOSBox-X 0.83.8 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweApple's M1, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Kwemakore mazhinji, muchinjiko-chikuva emulator iyo inotibvumidza isu kunakirwa MS-DOS software pane yanhasi mashandiro masisitimu akanga akamira. Muchokwadi, yaro yekupedzisira yepamutemo vhezheni yakaburitswa mu2010, asi nguva pfupi yadarika nharaunda yakatora girovhosi kuti itange forogo uye ienderere mberi nekuvandudza kwayo. Zita rakachinja zvishoma, ivo vakangowedzera an -X kusvika kumagumo, uye maawa mashoma apfuura vakaparura Zvayakanakira, inogadziridza inouya yakatakurwa nenhau.
Pane zvese zvitsva zvinouya neDOS-Bhokisi-X 0.83.8, pane chitsva chinobata pfungwa dzangu pamusoro pevamwe vese: tsigiro yeApple M1. Uye nei ndichifarira zvakadaro kana chandinoshandisa zvakanyanya iri Linux? Nekuti ini ndakasara ndiine kunzwa: Kufamba kwaApple kuvhura ARM-yekuvaka makomputa kwakachengetedza vagadziri kuti vasabatike pa x86_x64, izvo zvingangopedzisira zvichidudzira mukuwedzera kwekutsigirwa kwemamwe madhivhoni eARM. Zvekurota kuti hazvirambe.
DOSBox-X 0.83.8 Zvakakosha
Scalable TrueType font (TTF) kuburitsa kweDOS kunyorera.
On-screen mavara masitaera eDOS kunyorera.
Tsigiro yeMacs nyowani neM1 uye macOS Big Sur.
Iwe unogona ikozvino kunama zvinyorwa kubva kubhodhibhodhi kuita macOS SDL1 inovaka.
Sisitimu menyu muWindows SDL2 inovaka.
Kusarudzwa kweakajairika makiyi ekutambira kubva kumenyu.
Ikozvino inoshandura OpenGL shaders (GLSL) panguva yekumhanya.
Inotaridza chimiro cheiyo IDE disk kana CD.
Tsigiro yekumisikidza CD MAME CHD mifananidzo.
Tsigiro yekuchengetedza mafaera ekuchengetedza chinzvimbo basa.
Yakagadziridzwa MODE yekuraira kuti uchinje masikirini ekuyera.
Yakagadziridzwa LOADFIX yekuraira auto-kugovera ndangariro.
Yakagadziriswa otomatiki gadziriso ye "Yakapakirwa faira yakashatiswa" kukanganisa.
Yakagadziridzwa mepu edhita interface.
Kuisa DOSBox-X mapper mafaera kubva kumenyu.
Inoratidza rubatsiro rweDOS kubva kumenyu.
Tsvaga yekumisikidza faira uye mapper faira muDosBox-X nzira inogoneka.
Dzimwe sarudzo dzekuchengetedza dzeyakavakirwa-mukati yekugadzirisa turu.
Nyowani dzekumisikidza sarudzo dzekuchengetedza mamiriro emamiriro.
Kugadziriswa kwezvipembenene nekumwe kugadzirisa.
Rondedzero izere yeshanduko, pano.
DosBox-X 0.83.8 ikozvino iripo kubva kune webhusaiti yemunyori, iyo inogona kuwanikwa kubva Iyi link. Kune vashandisi veLinux, yekumhanyisa yekumisikidza system ndeyekuzviita kubva kune yako flatpak package. Dzimwe sarudzo ndedze kushandisa mabhinari, mirira kugoverwa kwedu kuti tivandudze mapakeji kubva kumahofisi avo epamutemo kana, zvakanaka, woisa yavo snap package kune avo vanosarudza iyi sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » DOSBox-X 0.83.8 inosvika ichiwedzera rutsigiro rweApple's M1, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
systemd 247 inosvika pamwe neshanduro mu udev, kugadzirisa mune masevhisi uye nezvimwe